Iibso Daroogooyinka Smart Adiga oo aan dhakhtar qorin oo Bilow Nolol Xaddidan [OneClick]
Waxaan helnay 2 alaabta aad heli karto
Dad badan ayaa na weydiiya "maxay ADHD u taagan tahay?". Micnaha 'ADHD' waa feejignaan la'aanta feejignaanta cillad la'aanta. Waa cillad caadi ahaan soo baxda inta lagu jiro carruurnimada, laakiin mararka qaarkood xitaa lama ogaado illaa qaan-gaarnimada ama qaan-gaarnimada.
ADHD waxaa lagu gartaa qofka oo aan awoodin inuu diirada saaro ama fiiro gaar ah yeesho. Dhibaatooyinku waxay muujinayaan degganaansho la'aan, qasab la'aan iyo dareen isku-habeyn la'aan. Iyagu sidoo kale waa dad aan dulqaad lahayn oo si fudud u mashquuliya, xitaa markay samaynayaan wax iyaga xiisaynaya. Xaaladda badanaa waxaa loo arkaa inay tahay cillad waxbarasho sababtoo ah waxay faragalin ku yeelan kartaa habka waxbarashada qaab riwaayad ah.
Waxaa jira murano badan oo ku saabsan ogaanshaha cudurka ADHD. Shakhsiyaadka qaarkood waxay u arkaan ku daritaanka "hyperactivity" baaritaanka inuu yahay mid aan sax ahayn, mala-awaal ah, aan habboonayn iyo xitaa weerar. Sababtoo ah cilad-darrada waxaa badanaa lagu arkaa carruurta marka hore, inbadan waxay rumeysan yihiin in si xad dhaaf ah loo ogaado ama khiyaano ay ka wadaan warshadaha maskaxda iyo dawooyinka ee qoysaska isku dayaya inay fahmaan ilmahooda fiican. Wax yar ayaa laga fahmay xaaladan marka laga eego dhanka cilmiga.
ADHD wuxuu sababa: maxaa sababa ADHD?
Su'aasha ku soo baxda maskaxda dadka badankood markay la kulmaan qof uu ku dhacay cilladani waa "maxaa sababa ADHD?". Dadka intiisa badani way ka jaahil san yihiin waxa ADHD keena ama astaamaha ADHD. Tani waa sababta, heerka dadka uu saameeyey cilladan, uu sii kordhayo maalinba maalinta ka dambeysa. Aqoonsiga astaamaha cudurkan iyo u daaweyntiisa si sax ah, dadku waxay u baahan yihiin inay ka feejignaadaan waxa keena ADHD. Taasi waxay dhalin kartaa cilladan.
Qeybtaan, waxaan ku soo bandhigeynaa waxyaabaha u horseeda Cilladaha Feejignaanta Feejignaanta ee dadka waaweyn iyo carruurta sida ay ku ogaadeen cilmibaarayaashu.
Sababaha ADHD ee dadka waaweyn
Sababta saxda ah ee ADHD wali lama ogaan. Si kastaba ha noqotee, cilmi baarisyo badan ayaa baaray sharaxaad kala duwan oo macquul ah.
Hiddaha iyo neerfaha
Xaaladda ayaa u muuqata inay qayb ahaan sabab u tahay hiddo-wadahaaga. Cilladaan ayaa ku badan ehelka dadka qaba marka loo fiiriyo dadka aan qabin, mataana waxay aad ugu dhowdahay markale inuu ku dhaco cilladaan hadii walaalkood / walaashood mataanaha ah uu qabo. Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah in la fahmo in qof qoyskaaga ka mid ah oo qaba ADHD uusan macnaheedu ahayn inaad hubaal yeelan doonto ADHD. Haysashada hiddo-wadayaasha ADHD kuma sababi doonto inaad cilladda qabtid; kaliya waxay ka dhigan tahay inaad heli karto.
Dadka qaba ADHD waxaa la muujiyey inay leeyihiin heerar kala duwan oo firfircoonaan ah meelo gaar ah oo maskaxda ka mid ah, sida aagagga hore ee maskaxda ee ku lug leh qorshaynta iyo xakamaynta dhaqanka. Sidoo kale, aagagga maskaxda ee ku lug leh xakameynta dhaqdhaqaaqa waxay muujinayaan kala duwanaansho. Tani waxay noqon kartaa sababta carruurta qaba ADHD ay ugu muuqdaan kuwo isku dhex yaacaya isla markaana dhaqaaqaya si aan la xakameyn karin.
Baarayaasha sidoo kale waxay la yimaadaan moodello sida astaamaha asaasiga ah ee ADHD ay u saameeyaan qaybaha kale ee nolosha qof. Waxay muujineysaa sida dhibaatooyinka feejignaan la'aanta, firfircoonaanta, iyo dareen la'aanta ay saameyn ugu yeelan karaan noloshooda.
Sababaha ADHD ee carruurta
ADHD waa cilad dabeecadeed oo caadi ah oo saameysa qiyaastii 8% ilaa 10% carruurta da'da dugsiga. Wiilashu waxay saddex jeer uga badan yihiin gabdhaha in laga helo, inkasta oo aan weli la fahmin sababta.
Carruurta qaba ADHD waxay u dhaqmaan si aan feker lahayn, waa kuwo kacsan, dhibna kala kulma inay diiradda saaraan. Way fahmi karaan waxa laga filayo iyaga laakiin waxay dhibaato ku qabaan raacitaankooda maxaa yeelay ma fadhiisan karaan, dheg u dhigi karaan, ama tegi karaan faahfaahinta.
Dabcan, dhammaan carruurta (gaar ahaan kuwa yaryar) sidan ayey u dhaqmaan mararka qaarkood, gaar ahaan markay walwalayaan ama faraxsan yihiin. Laakiin farqiga u dhexeeya ADHD ayaa ah in astaamuhu ay jiraan waqti dheer ayna ku dhacaan goobo kala duwan. Waxay daciifiyaan awoodda cunugga ee ku shaqeynta bulshada, tacliinta, iyo guriga.
Sababta dhabta ah?
Waxaa jira in ka badan hal sabab oo ah Feejignaanta Feejignaanta Cillad-darrada carruurta, badankoodna waxaa lagu ogaadaa inay ka soo jeedaan dhinacyada bayoolojiga. Xaaladaha qaarkood, waalidiinta ayaa lagu eedeynayaa xaaladdan oo kale, laakiin waxaa la rumeysan yahay in isbeddelka qaabdhismeedka maskaxda uu noqon karo mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn. Dheeraad ah, waxaa jira wakiilo bey'adeed oo gaar ah oo suuragal ah inay wax ka beddelaan dhaqanka ilmaha.
Jirka anatomy iyo waxqabadka maskaxda
Carruurta lagu ogaado inay qabaan ADHD waxay leeyihiin kala duwanaansho muuqda oo ku saabsan shaqada maskaxda marka loo barbar dhigo dhiggooda. Kiimikooyinka ku jira maskaxda, ee kala ah neurotransmitters, ayaa mas'uul ka ah dhaqanka noocaas ah. Kiimikooyinkan ayaa muhiim u ah isdhexgalka unugyada ku jira maskaxda. Neurotransmitter-ka la xiriirta cilladan, oo loo yaqaan 'dopamine', wuxuu u eg yahay cillad oo sidaas awgeed wuxuu keenaa cawaaqibyo aan fiicnayn oo ay ku jiraan dareen la'aan, feejignaan la'aan iyo feejignaan la'aan. Dheeraad ah, waxaa si cilmiyaysan loo cadeeyay in cunug qaba cudurka ADHD uu leeyahay mug maskax aad u yar marka loo eego cunugga caadiga ah. Carruurta noocan ah waxaa lagu ogaadaa inay yihiin kuwo aan xasaasi ka aheyn xaaladaha marka lagu amaano ama la ciqaabo.
Cudurka ADHD ayaa sidoo kale la aaminsan yahay in laga soo wareejiyo waalidiinta laga helo dhiig karka. Cunug kasta oo afaraad oo la ildaran cilladan wuxuu qaraabo la yahay ADHD. Cilladaan sidoo kale waxaa badanaa laga helaa mataano isku mid ah. Waxa kale oo jira fursado uu ilmuhu ku heli karo ADHD haddii waalidku u nugul yihiin khalkhal xagga maskaxda ah.
Hooyooyinka uurka leh ee caadeystay inay sigaar cabaan waxay halis ugu jiraan inay yeeshaan cunug qaba ADHD. Sidoo kale, isticmaalka khamriga ama daroogooyinka kale inta lagu jiro muddada uurka waxay si wax ku ool ah u celin kartaa howlaha neerfaha soo saara dopamine. Mid ka mid ah sababaha ugu xun ayaa ah in haweeneyda uurka leh ay ku dhacdo sunta kiimikada sida biphenyls polychlorinated. Kiimikada noocan oo kale ah ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa warshadaha sunta cayayaanka.
Isticmaalka daroogada sida kookaha ayaa loo cadeeyay inay caqabad ku tahay koritaanka caadiga ah ee soo-dhoweeyaasha maskaxda.
Sidoo kale, waxaa jira xaalado ay hooyooyinku ka naxariis yar yihiin oo ay aad ugu dhaleeceeyaan carruurtooda. Waxay sidoo kale u muuqdaan inay si xun u ciqaabaan ilmaha macno ahaan sababo yar awgood. Xaaladda noocaas ah ayaa laga yaabaa inay ku muujiso astaamaha ADHD habdhaqanka ilmaha.
Ku soo gaadhista cunug sunta deegaanka
Carruurta, markii ay soo gaadhaan sunta deegaanka sida leedhka iyo polyploryl-ka polychlorinated, ayaa laga baqayaa inay yeeshaan cilladan. Kordhinta soo-gaadhista heerarka leedhka waxay xitaa sababi kartaa dabeecad dagaal cunugga. Macdanta "lead" waxaa xitaa laga helaa carrada, siigada iyo sidoo kale tubooyinka biyaha. Waxyaabaha kale ee deegaanka suurtogalka u ah waxaa ka mid ah wasakheynta, cunnooyinka cunnada leh ee leh midabbo macmal ah iyo u-nuglaanta iftiinka nalka. Arrin xiiso leh, xitaa sonkorta ayaa la caddeeyay inay kor u qaaddo dabeecadda foosha xun ee xaaladaha qaarkood.
Waxaa jira arrimo yar oo kale oo halis u muuqda inay sababaan ADHD. Waxay ka mid yihiin daawashada telefishanka muddo dheer taas oo suurtogal ka dhigaysa in maskaxda ay rabto dhiirrigelin joogto ah.
Cilad-darrooyinka ku dhaca cunnooyinka maalinlaha ah ee cunugga ee xisaabtama nafaqo-xumada waxay sababi karaan hab-dhaqankiisa la beddelay.
Carruurta ka madhan jacaylka iyo amniga waxay ogaadaan in baahidooda aan la daboolin ayna yeeshaan calaamado la mid ah kuwa ADHD.
Wax kasta oo sababi kara ADHD ee ilmahaaga, helitaankiisa iyo daaweyntiisa waqtiga saxda ah ayaa ah waxa ugu fiican ee aad sameyn kartid, si aad ubadkaaga ugulaabtid nolol caadi ah. In kastoo ay qaadan karto waqti iyo daawo ku habboon, si ilmaha loogu soo celiyo xaaladdiisii ​​caadiga ahayd, waa in loo dulqaato oo taxaddar ku filan la yeesho, muddada daaweynta oo dhan.
Calaamadaha ADHD: waa maxay astaamaha ADHD?
Wax ka qabashada Cilladaha Feejignaanta Feejignaanta (ADHD) way ka fududahay. Xaaladaan oo aad uga sii darto ma garanayo haddii uu kugu dhacay cilladan.
Inta badan, astaamaha ADHD waxay dhacaan sida cunuggu u koro. Xitaa dadka waaweyn waxay lahaan karaan waqtiyo ay dareemayaan inaan diirada lasaarin ama la mashquulin. Sidoo kale waa wax aad u fudud in lagu qaldo astaamaha ADHD dhibaatooyin kala duwan oo fara badan sida naafonimada waxbarashada iyo noocyada kale ee arrimaha shucuurta ah. Tani waa sababta ay muhiim u tahay in la helo kiis looga shakisan yahay ADHD oo uu soo baaro xirfadle daryeel caafimaad.
Dad badan ayaa isweydiiya "Miyaan qabaa ADHD?". Hagaag, ma jiro kaliya hal tijaabo jireed ama caafimaad oo fudud oo loo isticmaali karo in lagu ogaado haddii qof uu qabo cudurka. Waalidiinta ka shakiya in ilmahoodu qabo xaaladan waxaa muhiim ah in dhakhtarka ilmaha lagala hadlo waxyaabaha ay ka walwalsan yihiin. Waxay yeelan doonaan liis hubineed oo calaamado kala duwan ah waxayna hubin karaan in ilmuhu uusan soo bandhigin calaamadaha xaaladaha la midka ah.
In kasta oo lala tashanayo xirfadle caafimaad had iyo jeer waa lagula taliyaa, calaamadaha qaar ee ADHD ayaa si cad u muuqda xitaa dadka aan tababbaran. Sida laga soo xigtay Machadka Qaranka ee Caafimaadka Maskaxda (NIMH), astaamahan ADD waxaa loo kala saaraa saddex tilmaamood - feejignaan la'aan, feejignaan la'aan, iyo dareen la'aan.
Ku halgamaya Tilmaamaha
Mid ka mid ah tiirarka tiirka qaybta taxaddar la'aanta ayaa la halgamaya tilmaamaha. Tan waxaa ka mid ah arrimaha tilmaamaha ku saabsan shaqooyinka loo diro, iyo sidoo kale ku guuldaraysiga in si sax ah diiradda loo saaro mashaariicda dugsiga. Jahwareerka iyo awood la'aanta in diiradda la saaro howlaha keli ah ayaa sidoo kale la xiriira arrimaha leh tilmaamaha soo socda.
Fidgeting iyo xoqidda
Dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa, sida foojignaanta iyo xoqidda, waxay noqon karaan calaamadaha ADHD. Haddii aadan awoodin inaad joojiso dhaqaaqista intaad fadhido, ama aad si joogto ah u garaacdo ama u ruxdo lifaaqa, tixgeli inaad kala hadasho dhakhtarkaaga wixii ku saabsan ADHD ama arrimo kale oo halis ah, sida cudurka Parkinson ama Tourette syndrome.
Dhibaato Shaqo Deggan
In kasta oo ay lamid tahay la halganka tilmaamaha, dhib ku qabashada shaqada aamusnaanta waa mid ka duwan, laakiin caadi ah, Calaamadaha Cilladaha Feejignaanta Feejignaanta sida uu qabo NIHM. Calaamaddan ADHD badanaa waxay la socotaa dhaqdhaqaaqyo kacsan ama codeyn. Meelaha xasilloon, sida maktabadaha ama isbitaalada, waxay badanaa u adeegaan sidii goobo muhiim ah si ay u soo bandhigaan astaamahan.
Qaybta ugu sareysa ee shucuur la'aanta waxaa iska leh dulqaad la'aan. Shaqsiyaad badan ayaa la xanuunsada heerar caadi ah oo sabar la'aan maalin kasta. Si kastaba ha noqotee, marka dulqaad la'aantaani ay ku soo dhacdo dhul aad u daran, waxay noqoneysaa calaamadda ADHD. Isbarbar dhig awoodaada deganaan oo ka koobnaan kuwa hareerahaaga ah si aad uga caawiso iftiiminta arrintaan suuragalka ah.
Waxba kuma jabna inaad yeelato qof xun ama hadal badan. Dad badan, tani waa raaxo iyo raaxo. Si kastaba ha noqotee, kuwa si caadi ah u hadla, si xad dhaaf ah, iyo sabab la'aan waxaa laga yaabaa inay la halgamayaan mid ka mid ah astaamaha ugu caansan ee ADHD - hadalka aan joogsiga lahayn.
Riyo maalmeed iyo Jahwareer
Si la mid ah feejignaan la'aan, ku dhaca fadhiyada riyooyinka badanaa waxay la xiriirtaa cilladan. Intaa waxaa sii dheer, inaad jahwareerto markii aad dib uga soo laabaneyso diiradda riyadan riyooyinka waa calaamadaha ADHD. Qof kastaa wuxuu ku raaxaystaa dib u haynta xusuusta qaldan ama maskaxdiisa ha u warwareegto waqti ka waqti, laakiin markii hawshani noqoto mid aan la xakamayn karin, waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii laga fiirsan lahaa caawimaad.
Faragelinta Dadka Kale iyo Dhibaatooyinka Wadahadallada
Xitaa shakhsiyaadka ugu bulshada badan way turunturoon karaan oo ku turunturoon karaan wadahadal waqti ka waqti, iyagoo samaynaya faux badan oo jidka ku jira. Markay arimahani noqdaan kuwo aan la xakamayn karin ama si aad ah u dhaca marar aad u badan, arrintu waxay isu beddeshaa kiis suurtagal ah. Haddii aad had iyo jeer ka dhex gasho dadka kale ama aad ku guuldareysato inaad u hoggaansanaato heerarka wadahadalka ee caadiga ah, ficiladani waxay hoosta ka xarriiqayaan arrin maskaxeed oo ka weyn. Tani waa mid ka mid ah astaamaha ADHD ee carruurta.
Ma ogtahay in mid ka mid ah astaamaha ADHD ee dadka waaweyn ay tahay darawalnimo aan taxaddar lahayn? Markaad qabtid ADHD, way adkaan kartaa inaad diirada saarto wadada. Waxaad si fudud u kala wareegi kartaa, taas oo keeni karta shilalka waddooyinka. Gaadiidku wuxuu kaa dhigi karaa mid aad u deggan. Waxa taa ka sii daran ayaa ah inaad u badan tahay inaad muran iyo dagaal ku gasho wadada.
Rumayso ama ha rumaysan, mid ka mid ah astaamaha ADHD ee dadka waaweyn waa dhibaatooyinka xiriirka. Tan waxaa ugu wacan xaqiiqda ah in dadka qaangaarka ah ee ADHD ay ku adag tahay inay dhageystaan ​​oo ay si wax ku ool ah uga jawaabaan, taasoo dhalisay xiriir xumo. Xushmeynta ballanqaadyadu sidoo kale waxay noqdaan dhibaato. Intaas waxaa sii dheer, shakhsiyaadka qaba ADHD waxay u muuqdaan inay yeeshaan ciil deg deg ah oo xanaaq ku ah guurka, saaxiibtinimada, ama xiriir kale.
Calaamado kale oo badan ayaa sidoo kale lala xiriiriyaa ADHD. Awood la'aanta in la fadhiisto cashada, ku-dhex-dhuumashada goobaha aan habboonayn, iyo barashada caqabadaha dhammaantood waxay ku quudiyaan xaalad wanaagsan oo cilladan. Si kastaba ha noqotee, dhammaantood waxay ku dhexjiraan toddobadaas calaamadood ee waaweyn ama ku siyaadiyeen qaab ama qaab ahaan. Haddii aad dhibaato kala kulantid mid ka mid ah astaamahan, ama dhowr isku dar ah, tixgeli inaad ballan la sameysatid ballanta cudurka ADHD daryeel bixiyahaaga koowaad ama cilmi nafsi kasta si aad ugala hadasho ficil dheeri ah.
ADHD ogaanshaha: sidee lagu ogaadaa ADHD?
Calaamadaha caadiga ah ama astaamaha ADHD waxaa ka mid ah: kacsanaan la'aan, fallaadhin, si fudud u mashquulin kara, iyo dhammaystir la'aanta howlaha. In kasta oo carruurta si caadi ah loo ogaado, ADHD waa cilad ku dhacda dad waaweyn oo badan sidoo kale. Waxaa jiray dhowr tijaabo oo la soo saaray si looga caawiyo baaritaanka ADHD ee carruurta, iyadoo qaar ka mid ah kuwa aad loogu kalsoon yahay ay hoos ku taxan yihiin.
Imtixaanka Stanford-Binet waa qiimeynta ugu caansan ee garashada garashada, oo sidoo kale loo yaqaan baaritaanka IQ. Waxay ka kooban tahay lixdan su’aalood oo qofka la waydiiyo inuu ka jawaabo. Jawaabahaas ayaa markaa la qiimeeyaa si loo siiyo qiyaas garasho garasho, ama IQ ee bukaanka. Tijaabadan waxaa lagu qaadi karaa khadka tooska ah sidoo kale dhakhtar.
Iskeelka Sirdoonka Weschler ee Carruurta
Tijaabada caanka ah ee carruurta loo yaqaan 'Weschler Intelligence Scale for Children' (WISC-IV). Baaritaanka waxaa lagu sameeyaa carruurta da'doodu u dhexeyso 6 iyo 16 waxayna qaadataa inta u dhexeysa 48-65 daqiiqo si loo go'aamiyo awoodda guud ee bukaan-socodka. Imtixaanku wuxuu ka kooban yahay shan iyo toban hoosaadyo, oo lagu qiyaaso shan tilmaamood oo waaweyn. Kuwani waa: tusmada cadaadiska hadalka, muuqaalka muuqaalka muuqaalka, tusmada sababaynta dareeraha, tusmada xasuusta shaqada, iyo tusmada xawaaraha waxqabadka. Tilmaamahan waxaa lagu qiimeeyaa iyada oo ay weheliso shan iyo tobanka hoosaadyo si loo go'aamiyo awooda aqooneed ee shakhsiga la baaray, taas oo iyaduna gacan ka geysan karta baaritaanka ADHD.
Batariga Kaufman ee Carruurta
Tijaabad kale oo caan ah oo lagu ogaado cudurka ADHD ee carruurta waa Kaufman Battery for Children (KABC). KABC waa tijaabo lagu ogaanayo cilmu-nafsiga si loo qiimeeyo horumarka garashada ee la sameeyay 1983 oo dib loo eegay 2004. Tijaabadani waxay adeegsaneysaa horumarin cusub oo ku saabsan aragtida cilmu-nafsiga iyo habka tirakoobka, taasoo ka dhigaysa mid caan ku ah bukaanka iyo dhakhaatiirta. KABC waxay sidoo kale ahmiyad gaar ah siisaa kooxaha naafada ah iyo kooxaha la ildaran naafonimada waxbarashada, iyo sidoo kale dhaqamada laga tirada badan yahay.
Wareysiga dhaqtarka iyo miisaanka qiimeynta
Tijaabooyinkan ka sokow, bukaanka looga shakisan yahay inuu la il daran yahay xaaladan wuxuu wareysi la yeelan karaa takhtar, inta lagu gudajiro sidoo kale baaritaan jireed ayaa sidoo kale lagu sameyn doonaa. Liiska hubinta qiyaasta habdhaqanka iyo qiimeynta ayaa la siin doonaa waalidiinta bukaanka iyo macallimiinta si ay u buuxiyaan inta ay kormeerayaan qofka si loo ogaado haddii arrimo iyo astaamo qaarkood ay dhacaan. Liisaska qiimeyntan oo lagu daray mid ka mid ah baaritaannadii horay loo soo sheegay waxaa lagu go'aamiyay inay yihiin habab wax ku ool ah oo lagu ogaado.
Daaweynta ADHD: Daawada ADHD daaweynta
Waalid ahaan, waxaad marwalba rabtaan inaad uheshaan daaweynta ugufiican ee canuggaaga si ay uga caawiso asaga / ayada inuu dhaqso ugaga baxo dhibaatada. Xaqiiqdu waxay tahay, majirto daaweyn ugufiican ADHD xaqiiqkalena waxay tahay, hada, daawo umalaha ADHD. Si kastaba ha noqotee, uma baahnid inaad niyad jabto. Daawooyinka la heli karo ayaa wali ka caawin kara ilmahaaga inuu nolol guuleysto.
Daawooyinka ADHD ee loo qoro carruurta
Xulashada daaweyntan ayaa si ballaaran loo isticmaalaa waxayna keentaa saameyn degdeg ah.
Daawooyinka ugu horreeya ee ADHD ee loo qoro badanaa waa kiciyeyaasha. Kiciyeyaashani waxay kordhiyaan waxqabadka maskaxda, gaar ahaan meelaha mas'uulka ka ah feejignaanta, xakamaynta kicinta, iyo diiradda. Kiciyeyaashu waxay leeyihiin saameyn togan markay tahay hagaajinta diiradda iyo is-xakameynta. Si kastaba ha noqotee, markay tahay xirfadaha bulshada iyo hanashada tacliinta, kuwani wali waxay ku tiirsan yihiin ilmaha laftiisa. Daawooyinka kiciya ayaa dhab ahaan ka kooban labada midkood: methylphenidate iyo amphetamines.
Xulashada koowaad ee labadoodaba waa methylphenidate maxaa yeelay waxaa la ogaaday inay leedahay waxyeellooyin yar. Methylphenidate dhab ahaantii waxay ku timaaddaa waqti gaaban, dhexdhexaad ah, iyo waqti dheer. Haddii ilmuhu uusan ka jawaabin methylphenidate, markaa waxaa loo qoray amfetamines. Muddooyinka gaaban ee soconaya 6 saacadood, Dextrostat iyo Dexedrine ayaa loo qoray. Muddooyin dhexdhexaad ah iyo kuwo dhaadheer, Adderall ayaa loo qoray.
Haddii kiciyayaashu aysan waxtar u lahayn ilmaha, markaa Atomoxetine iyo dawooyinka lidka diiqadda ayaa loo qoray. Marka laba daaweyn oo ku lug leh kiciyayaashu ay fashilmaan, markaa Atomoxetine waa tallaabada xigta ee hawsha.
Hal shay oo muhiim ah in laga fiirsado daawooyinka ADHD ayaa ah xaqiiqda ah inuusan jirin hal dawo oo lagula taliyo carruurta oo dhan. Daawooyinka waxaa dhab ahaan loogu bixiyaa qaab tijaabo-iyo-qalad ah. Kuwani dhammaantood waxay ku xiran yihiin sida ilmuhu ula dhaqmi lahaa daawo gaar ah. Si kastaba ha noqotee, marka daaweynta saxda ah la go'aamiyo, astaamaha cilladda ayaa markaa si fudud horay loogu maamuli karaa.
Haddii ay jirto hal shay oo kale oo ay tahay inaad ka ogaato daawooyinka ADHD, waa xaqiiqda inaysan run ahaantii daaweyn sababaha cudurka. Waxa kaliya ee ay sameyn karaan ayaa ah inay yareeyaan astaamaha ADHD. Sidoo kale, markii daawooyinkan ay ku dhex milmaan la-talin ama dabiiciyan dabiiciyan, tani runti wax weyn ayey ka tari kartaa.
Daawooyinka ADHD ee loo qoro dadka waaweyn
Xaaladdu ma aha oo keliya cillad ku timaadda carruurta. Waxay ku dhacdaa dadka waaweyn sidoo kale! In kasta oo ay u muuqato inay adag tahay in la maareeyo, haddana waxaa jira rajo iyo faa'iidooyin aad u wanaagsan oo loo adeegsado dawada ADHD ee dadka waaweyn.
Waxaa jira xulashooyin badan oo aad ku dooran karto nooca daawada ADHD ah ee adiga kugu habboon. Adigu waad qaadan kartaa daawada laguu qoray ee ADHD ama waxaad isku dayi kartaa daaweynta dabiiciga ah ee ADHD.
Si loo helo warqad dhakhtar qoray oo loogu talagalay ADHD, waa in marka hore lagugu baaro dhakhtarka maskaxda ama neerfaha. Tani waxay ku lug leedahay su'aalo culus iyo tijaabooyin si loo go'aamiyo nooc hoosaadka ADHD ee aad yeelan karto. Tani waxay kaa caawin doontaa go'aaminta daawada ADHD ee adiga kugu habboon.
Waxaa jira fasalo dawooyin dhakhtar qoro ah oo loogu talagalay dadka waaweyn ee qaba ADHD. Kuwani waxay u dhexeeyaan kiciyeyaal ilaa fasallo kale oo daroogo ah oo leh saameyn aan toos ahayn oo ka caawinaya astaamaha ADHD.
Guud ahaan: waa isku darka amfetamine iyo dextroamphetamine. Tani waa xulasho guud oo ah daawada ADHD ee dadka waaweyn. Adderall wuxuu ku shaqeeyaa nidaamka neerfaha ee dhexe si uu uga caawiyo fududeynta isku-buuqsanaanta iyo xakameynta kicinta. Dhakhtarkaagu wuxuu beddeli doonaa qiyaastaada illaa aad ka samayso qorshe daaweyn adiga kugu habboon.
Ritalin (Methylphenidate): waa habdhis-wade dhexe oo kiciya oo la mid ah Adderall. Waxay ka caawisaa fududeynta astaamaha isku-buuqsanaanta iyo xakamaynta kicinta. Ritalin waa dawo bartilmaameedsata astaamaha ADHD iyo ADD labadaba. Waxaa lagugula talinayaa in daroogadani ay qayb ka tahay barnaamij daaweyn taageero ah oo ku lug leh la-talin iyo daaweyn kale si loo kordhiyo daaweynta ADHD.
Concerta (Methylphenidate): wuxuu u dhaqmaa sida Ritalin oo kale oo ah habka neerfaha ee kiciya. Concerta waa magac kale oo astaan ​​u ah fasalka daroogada, iyo sidoo kale Metadate.
Vyvanse (Lisdexamfetamine) waa daawo cusub oo ADHD ah oo loogu talagalay dadka waaweyn. Vyvanse sidoo kale si badbaado leh ayaa loogu isticmaali karaa carruurta leh ADHD da 'da 6 jir. Waa hab-dhismeedka neerfayaasha kiciya oo fududeeya astaamaha isku-buuqsanaanta, xakamaynta kicinta, iyo caawinta dadka waaweyn ee ADHD ee leh dhibaatooyin cunno fara badan sababtoo ah dareenkooda. Sababta ay Vyvanse ugu dooratay daawada ADHD ee dadka waawayn waxay tahay iyada oo aan lahayn waxyeellooyin aad u daran sida daawada kale ee ADHD ay si dhakhso leh u sii deynayso.
Straterra: daroogadani ma aha mid kicisa, oo ka duwan dawooyinka kale ee ADHD ee dadka waaweyn. Straterra waa xulasho xayiraada norepinephrine reuptake inhibitor, taas oo ah qaab la mid ah waxqabadka qaar ka mid ah antidepressants. Habka dhabta ah ee waxqabadka daaweynta ADHD ee daawadan lama yaqaan. Si kastaba ha noqotee, waxaa loo maleynayaa inay ka timid kororka norepinephrine ee maskaxda. Norepinephrine waxay door muhiim ah ka ciyaartaa feejignaanta iyo dabeecada. Straterra waxaa lagula talinayaa inay qayb ka noqoto barnaamijka daaweynta ee ku lug leh talaabooyinka nafsaani, waxbarasho, iyo bulsho ee lagu daweynayo xaalada.
Sida aad u aragto waxaa jira dhowr beddelaad oo loogu talagalay daawooyinka ADHD ee loogu talagalay dadka waaweyn. Si aad wax badan uga ogaato waxa daawada ah ee kugu habboon adiga, waxaad u baahan doontaa inaad talo ka raadsato dhakhtarkaaga markaad baraneyso dhammaan xulashooyinkaaga si aad u ogaato waxaad u qaadan karto xaaladdaada.
Farqiga u dhexeeya daawooyinka IRHD iyo daawada XR ee loogu talagalay dadka waaweyn
Qof kastaa wuxuu ugu jawaab celiyaa si ka duwan daawooyinka ADHD. Waxay qaadan kartaa tijaabo ah inaad tijaabiso dhowr dawo oo kala duwan oo sida ugu fiican adiga kuu shaqeyn kara.
Farqiga u dhexeeya qaabeynta IR iyo XR waa waqtiga ay shaqeynayaan. Daawooyinka ADHD ee dadka waaweyn, waqtiga daawada la siidaayo waxay door muhiim ah ka ciyaari kartaa daaweynta ADHD.
Qaabdhismeedka IR-ga waxaa loo yaqaannaa qaab-soo-deyn deg deg ah. Qaab-dhismeedyadan ayaa isla markiiba shaqeyn doona marka la liqo. Waxay kuxirantahay baahida qaangaarka qaba ADHD, qaabeynta IR waxay ubaahantahay in lasameeyo inbadan si looga fogaado daawada inay duugowdo.
Qaabdhismeedka 'ER' ayaa la sii daayaa waqti dheeri ah. Waxay bixiyaan bilaw aad u jilicsan oo ficil ah waxayna leeyihiin waqti dheeri ah oo ay ku shaqeeyaan jirka. Doorashadan waxay noqon kartaa xulasho weyn si loo yareeyo dhibaatooyinka soo raaca dadka waaweyn qaarkood ee leh khibrada ADHD ee qaababka IR. Intaas waxaa sii dheer, qaabeynta ER waa xulasho weyn oo lala yeesho dadka ilooba inay daawooyinkooda ku qaataan waqtigooda.
Daawooyinka ADHD ee dabiiciga ah ee dadka waaweyn
Iyada oo ay weheliso, ama xitaa iyada oo aan la qorin daawada ADHD ee loogu talagalay dadka waaweyn, waxaa jira alaab dabiici ah oo halkaas ka baxsan taas oo noqon karta xulasho aad u fiican oo lagu daaweynayo qaangaarka ADHD. Kahor intaadan tixgelin daawada ADHD ee dabiiciga ah, hubi inaad kala dooratid takhtarkaaga xulashooyinkaaga.
Saliidda badda: Aashitada dufanka omega 3 waxay cadeeyeen inay kordhiyaan xirfadaha caafimaadka maskaxda ee dadka waaweyn ee qaba xaalada. Saliida kalluunka waxay hagaajin kartaa kacsanaanta, waxay hagaajin kartaa dareenka, waxayna yareyn kartaa fikirka aan caddayn. Waxaad ka qaadan kartaa saliida kalluunka kaabsol ama waxaad ka qaadan kartaa cuntooyinka sida salmon, tuna, kalluunka, iyo sardines. Foomamka kaabsolka ah ayaa aad u habboon. Saliida ugu sareysa ee lagula taliyo ADHD waa Nordic Naturals.
Zinc: Daraasado dhawr ah ayaa muujiyay hoos u dhaca ku yimaadda firfircoonaanta iyo dareen-la'aanta iyadoo la qaadanayo kaabayaasha zinc ee dadka qaba ADHD. Daraasadaha ayaa sheegaya bukaanada ADHD ee qaangaarka ah waxay leeyihiin heerar hoose oo zinc ah marka loo eego dadka aan lahayn xaalad. Waxaad ku qaadan kartaa zinc qaab kaabsal ah ama waxaad ka heli kartaa cuntooyinka sida lowska, waxyaabaha caanaha laga sameeyo, digirta, badarka oo dhan, iyo badarka la xoojiyay. Haddii aad ka fiirsaneyso zinc inuu yahay daawo dheeri ah, nooca ugu fiican ee la doorto waxaa leh NOW Foods.
Melatonin: Daawadani daruuri kama aha inay si toos ah uga caawiso ADHD. Kuwa hurdada ku dhibtooda, melatoninku waa daawo dabiici ah oo dadka waaweyn ka caawisa inay seexdaan habeenkii. Dadka qaba ADHD ee hurdo la'aantu waxay ku dhacdaa astaamaha ADHD.
Daawada ADHD ee dadka waaweyni waxay faa'iido u yeelan kartaa hagaajinta tayada nolosha qofka. Haddii aad dareento qof, ama xitaa naftaada ay leedahay astaamaha ADHD, haka baqin in lagugu ogaado. Daawada ADHD ee dadka waaweyn ayaa la heli karay sanado. Waxaa lagu caddeeyey inay gacan ka geystaan ​​sidii loo maareyn lahaa cilladda si wax ku ool ah. Dad badan oo waaweyn oo qaatay daawada ADHD kama qoomameeyaan go'aankooda.
Daaweynta akhlaaqda waxay qaadan kartaa waqti iyo dadaal badan laakiin natiijada waxay noqon kartaa mid faa'iido badan leh. Intaa waxaa dheer, haddii waalidku aysan rabin inay carruurtu qaataan daawooyinka ADHD, daaweynta dabeecadda ayaa ah xulasho wanaagsan. Daaweynta akhlaaqda waxay ku lug leedahay ku xoojinta carruurta dhiirigelin markay wax wanaagsan sameeyaan iyo sidoo kale ciqaab markay khaladaad sameeyaan (si kastaba ha noqotee, ciqaabta waa inaan loo isticmaalin si isdaba joog ah). Daaweynta dabeecadda garashada waxay ka caawisaa carruurta inay gartaan fikradaha xun xun iyo sida looga fogaado. Ka duwan daaweynta daaweynta, saameynta daaweynta dabeecadeed waa mid joogto ah. Iyadoo la adeegsanayo habka saxda ah, daaweynta dabeecadda waxay sameyn kartaa waxyaabo yaab leh si ay uga caawiso carruurta inay maareeyaan oo ay ka adkaadaan xaaladda.
Waa maxay daaweynta ugu fiican ee ADHD?
Sidaan kor kusoo sheegnay, majiro daaweyn ugufiican ADHD. Si kastaba ha noqotee, waalidku waxay go'aan ku gaari karaan iyagoo ku saleynaya fikirkooda ku saabsan daroogada. Haddii waalidku aysan rabin in carruurtoodu isticmaalaan daroogada, daaweynta habdhaqanka ayaa noqon karta xulasho wanaagsan. Ka duwan daaweynta, daaweynta dabeecadda oo keliya ayaa ka caawin karta carruurta inay maareeyaan astaamaha ADHD si aad u wanaagsan haddii waalidku si habboon u adeegsado. Si kastaba ha noqotee, iyada oo loo marayo ficil ahaan, dhakhaatiirtu waxay ku taliyeen in waalidku u isticmaalaan daaweynta dabeecadda oo ay weheliso daawada saameynta ugu badan.